Ntụziaka Ntụziaka Fondant (arụrụ n'ụlọ) + Nkuzi vidio - Usoro Culinary
Ntụziaka Ntụziaka (LMF)
Ntụziaka dị ụtọ nke na-atọ ụtọ, dị mfe iji rụọ ọrụ, Ọ dịghị akwa ma ọ bụ na-enweta akpụkpọ anụ Elephant
Ntụziaka a na-atọ ụtọ bụ ọkacha mmasị n'etiti ndị na-eme ihe ntụrụndụ na ndị ọkachamara na-eme achịcha. Soft, ezigbo, mfe. na-arụ ọrụ ma na-atọ ụtọ! Ntụziaka a na-atọ ụtọ dị ezigbo mma na ị gaghị azụta ọnụ ọzọ dị oke ọnụ ọzọ.
Ntụziaka m na-atọ ụtọ (LMF fondant) bụ otu n'ime ndị mbụ ebipụtara na 2010 azụ mgbe m ka dị Isanlọ Ọrụ Artisan Cake ma ka bu uzo nkpa nri m.
Na-enwe obi ụtọ bụ isi egwuregwu a na-eri eri nke nwa gị dị afọ asatọ na-achọkarị. Ọ bụrụ na ụtọ oge niile bụ ihe oriri a na-eri eri mgbe ahụ marshmallow fondant bụ ụrọ oriri. Ọ bụ ihe dịgasị iche iche, dị mfe iji ma sie ezigbo ụtọ (anaghị m akwado ka ị rie ụrọ n'agbanyeghị).
Emeela m ka m nwee ike isi nri m na-atọ ụtọ, bipụtakwa ya ma mee ya ọtụtụ puku ndị na-eme achịcha, ndị na-eme achịcha na ndị na-ede blọgụ. Ọ ghọrọ ihe a ma ama na ọbụna aha ya bụ LMF (liz marek fondant) site na ọ bụ nnukwu fans. A gwara m ruo ọtụtụ afọ na ịme obi ụtọ “na-eri oge” ma ọ bụ na “ọ bụ ihe siri ike na igwekota”. Thesebọchị ndị a, a matara nke ọma na ịme onwe gị obi ụtọ bụ ụzọ akụnụba, ụtọ na ụzọ dị mfe iji nweta obi ụtọ dị elu.
Marshmallow Fondant na nke oge niile
Mgbe mbụ m bidoro achicha icho mma dị ka ihe omume ntụrụndụ n’afọ 2008, naanị ihe na-atọ m ụtọ bụ Wilton. Amaghịdị m ụdị ndị ọzọ na-atọ ụtọ dị. Amaghị m na ọ bụ ihe siri ike iji n'ihi na ọ bụ ihe niile m na-emebu. Echere m na o were 2-3 gbalịa ikpuchi achicha. Nke a bụkwa tupu mgbasa ozi mmekọrịta na ndị otu facebook ka ọtụtụ ihe m si wee si na mgba dị ọcha.
Oge izizi gbalịrị ime ka obi tọọ anyị ụtọ bụ nke dị mkpa. Emere m iwu na oge ikpeazụ ma na mberede, achọtara m na enweghị m obi ụtọ iji nweta m site na ọrụ m! Cue ọnọdụ ụjọ! Achọrọ m uzommeputa otu esi eme obi ụtọ na ọ chọrọ tọn nri na ihe ndị m na-enweghị. Ok tie otu. M enyocha ọzọ “mfe arụrụ n'ụlọ fondant” Ntụziaka na naanị chọrọ abụọ Efrata. Marshmallows na ntụ ntụ ntụ. Epic ida. Ọ gbawara, dọkasịa ma bụrụ mmanu n'ezie? Amachaghị etu nke ahụ si kwe omume. N'enwe obi nkoropụ, ejiri m ihe ụtọ ahụ jikọtara ya na ihe dịka 1/2 paụnd nke fọdụrụ wilton fondant. Agwakọtara m ya, wepụta ya ma ju m anya maka otu o si ekpuchi achicha ahụ n'ụzọ dị mfe! Enweghị ịkwa ákwá, enweghị akara pock, ọ dịghị egosipụta! Na ọ bụ otú ahụ ka m si nwee mmasị fondant Ntụziaka mụrụ.
Maka nsonaazụ kacha mma, gbalịa itinye ihe a na-atọ anyị ụtọ ọcha achicha uzommeputa ma hu otu osi di uto ha abuo.
Gini mere I ji tinye udi nke obi uto?
Enwetara m ajụjụ ahụ nke ukwuu. Enwetara m ya. O yiri ka ọ bụ obere azụ ịgbakwunye fondant na a fondant uzommeputa ma nụrụ m.
Enwere ike ịme fondant marshmallow n'etinyeghi ihe emere tupu ya ma ọ gaghị agbatị. Naanị ya agaghị adị. Amaara m na ọtụtụ nke ndị na-eme marshmallow fondant na-enweghị tupu mere ma ọ dị nnọọ adịghị eme dị ka nke ọma na ị bụ ebe a na-amụta banyere Kacha mma n'ụlọ arụrụ n'ụlọ fondant si n'ebe nri?
Ihe mere eji agbakwunye na pre-mere fondant bụ iji melite arụmọrụ nke fondant arụrụ n'ụlọ ma ị na-eme isi ihe dị ọnụ ala nke fondant nke nwere ike ọ gaghị eme ma ọ bụ detụ ezigbo mma n'ime nnukwu ogbe nwere oke-mma, super yummy fondant.
Gịnị Ka E Ji ondtọ Na-eme?
Enwere ike iji ọtụtụ ihe mee ụlọ ahịa zụrụ nke ọma mana n'ozuzu ya, ọ bụ shuga, ekpomeekpo na ụfọdụ chịngọm (iji mee ka ọ gbatịa). Dabere na ngwakọta ahụ, ụdị ụtọ gị nwere ike ịbụ nke dị nro na nke nnyapade ka ọ na-ata ma ọ bụ ọbụna sie ike! M na-agwakarị onye ọ bụla na-ekwu na ha enweghị mmasị na uto nke obi ụtọ na ọ na-amasịkarị ọnụ ala ụlọ ahịa chocolate dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ihe ndina, okwu dị mma. Ọ bụghị ihe niile na-atọ ụtọ ka ọ bụ otu!
Onye ọ bụla nwere ike ịgwa gị na ezigbo onye hụrụ n'anya dị.
Marshmallow fondant enweghị ọtụtụ ihe ndị ahụ. Marshmallows na-enye isi ihe owuwu. Marshmallows nwere ọtụtụ shuga na gelatin. Obere obere akwukwo nri na-enyere onye a fụrị aka ihicha. Akụkụ kachasị mma bụ na LMF na-arụ ọrụ kachasị mma mgbe ị na-eji ezigbo marshmallows dị ọnụ ala nke na-eweta ọnụahịa kwa ogbe ọbụlagodi.
Obi Ftọ Dị Reallytọ n'Ezie?
Fondant bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ndị ahịa m na-agwa m na ha kpọrọ asị tupu oge a agbam akwukwo achicha . M ga-amụmụ ọnụ ọchị ma kwee n'isi ma sị 'ọ dị mma' mana amaara m na ozugbo ha detụrụ ụzọ m si arụ ụlọ marshmallow nke na-atọ ụtọ (akpọrọ LMF site na ndị Fans) aga m etinye ha. Ọ dịghị ihe na-enye afọ ojuju karịa inyefe ha obere ihe ụtọ ahụ ma hụ ọdịdị ihu ha, isi “Agaghị m amasị nke a” na ujo dị ọcha, mgbe ahụ ntakịrị ịta nri, nnukwu ịmụmụ ọnụ ọchị, emesịa “OMG nke a dị nnọọ mma! ”
kedu mgbe anụ ọhịa wolf na -alọta na netflix
My marshmallow fondant abụrụla m ihe nzuzo nzuzo ruo ọtụtụ afọ ma ugbu a ọ nwere ike ịbụ nke gị.
Ntụziaka dị mfe maka ndị mbido
Ya mere, ịchọrọ ịrụ ọrụ na-atọ ụtọ mana ị na-atụ ụjọ! Enwetara m ya! Ọtụtụ ndị mbido na-atụ ụjọ ịrụ ọrụ na-atọ ụtọ n'ihi na ha anụla ka o si sie ike ịrụ ọrụ! Ma ị maara ihe? Ihe nzuzo n’inwe ihe ịga nke ọma bụ n’ime onwe gị. Ọ bụrụ na ị na-akụda, ịkwa ákwá, anụ enyí, pockmarks, egosipụta ma ọ bụ ọbụna nkụ, ikekwe ị na-eji fondant ụlọ ahịa zụrụ nke dị njọ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmụ ihe niile gbasara isi nke icho mma achicha ị nwere ike ịlele usoro anyị na Sugar Geek Show ma ọ bụrụ na nke ahụ anaghị agbakwunye gị, nke anyị agbamakwụkwọ achicha isi usoro uche!
Ntụziaka a dị mfe ịme, anaghị ewere ihe ọ bụla mara mma ma rụọ ọrụ nke ọma ozugbo ịmechara (ka na-ekpo ọkụ).
Pụrụ Ime Onye Na-enweghị Marshmallows?
Otu n'ime ihe ndị kachasị emetụ n'ahụ nke sitere na nhazi m LMF nwere ike ịbụ DKF (Danettes Kosher Fondant). Enyi m Danette enweghị ike iri gelatin ya mere o ji chepụta ụzọ dị ụtọ nke dị mfe dị ka LMF mana ọ na-eji marshmallow fluff karịa ọnụ ala marshmallows. Ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma ma ọ bụ kosher!
Atụmatụ maka ịrụ ọrụ na Fondant
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ndị ọzọ maka ịrụ ọrụ na-atọ ụtọ arụrụ n'ụlọ. Nwere ike ịmụtakwu banyere isi nke achicha decorating anyị bụ isi achicha decorating usoro.
Nyefee gị ezigbo mkpa. 1/8 ″ bụ ebe dị mma ịnọ ka ihe na-atọ gị ụtọ ghara ịdọka, ị nwere ike nweta ọnụ ọnụ ndị ahụ dị nkọ ma ị ga-enweta ọtụtụ ihe na otu ogbe.
Zute achịcha gị tupu ị kpuchie ha. Gbaa mbọ hụ na buttercream ma ọ bụ ganache dị mma ma dị oyi (mana oyi adịghị) tupu ị kpuchie achicha ahụ maka nsonaazụ kacha mma.
Nyefee onye ị hụrụ n'anya karịa ibu karịa. A ndudue mbido ndudue na-inyefe onye obi ụtọ dị obere ma mgbe ahụ ị ga-enweta tọn ruffles na anya mmiri gburugburu isi nke achicha ahụ. Ọ bụrụ na ị wepụta otu ibe ka ibu, ọ fọrọ nke nta ka ọ kpuchie onwe ya.
Ọnọdụ obi ụtọ gị tupu i jiri ya. Ọ gwụla ma ọ bụrụ na ị mere ya, mgbe ahụ kpoo onye nwere obi ụtọ ma ghee ya nke ọma ruo mgbe ọ dị mma ma na-agbatị. Oyi fondant mmasị adọka.
Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ tiers iji kpuchie, kpuchie nke kasị ukwuu na mbụ wee mee ka ụzọ gị gbadata pere mpe iji nweta ọtụtụ ihe ị na-atọ ụtọ. Otu ogbe LMF ga-ekpuchi obere 10 '-8' -6 'gburugburu na obere ntakịrị fọdụrụ ma ọ bụrụ na ị tụgharịa ya na 1/8 ″.
Kedu Ka I Si Agba Ftọ?
Ozugbo ị maara ihe ị na-eji esi nri ịtọ ụtọ, ị nwere ike ịchọrọ agba gị fondant uzommeputa . Isi ihe dị ebe a bụ ijide n'aka na ị gaghị eji ọtụtụ agba agba nri. Ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ ihe ọ nwere ike imebi mmebi nke onye ị hụrụ n'anya, ọ ga - adị ka ọ nwere obere oghere na ya.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a ìhè agba nke fondant ị pụrụ nanị tinye a obere agba gị ọcha fondant ma ọ bụrụ na ị chọrọ a super-egbuke egbuke na agba ma ọ bụ ọchịchịrị na agba dị ka nwa fondant ma ọ bụ acha ọbara ọbara fondant mgbe ahụ ịkwesịrị ịgbakwunye agba n'oge usoro nke ịme ya maka nsonaazụ kacha mma.
Ngwaọrụ Kitchen Na-eme Marshmallow Fondant
Igwekota Kitchenaid Mgbe mbụ m bidoro icho mma, enwere m KitchenAid dị mfe. Nke ahụ bụ ihe niile ị chọrọ n'ezie! Ntụziaka a na-arụ ọrụ kachasị mma mgbe emere ya na ọkwa ochie.
Otu esi eme obi uto
Microwave 1 lb nke marshmallows na 30-nke abụọ gbawara ruo mgbe agbazere kpamkpam
Tinye mmiri gi ma wunye marshmallow gbazee n'ime nnukwu efere nke ihe nkwụnye ihe na nkochi mgwakota agwa
Tinye akwukwo nri gi
Bido ịgbakwunye na suga gị niile n'otu iko n'otu oge, hapụ otu iko
Mee ka obi na-atọ gị ụtọ jikọta ya ruo mgbe ọ ga-adị ire ụtọ, nke a nwere ike were nkeji 5 ma ọ bụ karịa
Ghichaa onye nwere obi ụtọ n'ime nnukwu efere ahụ na spatula n'ime efere gị nke fọdụrụ ntụ ntụ
Igwakorita na ngwakọta ruo mgbe niile ntụ ntụ sugar na-webatara
Kpoo ụlọ ahịa gị zụtara fondant maka 30 sekọnd ma gbakwunye ya na marshmallow fondant
Igwakorita ruo mgbe obi ụtọ nwere ike agbatị dị ka taffy na-enweghị na-agbasa
Iji mee nhazi a, ị ga-achọ obere ụlọ ahịa zụtara fondant. Ọ dịghị mkpa ka ọ bụrụ Wilton mana nke ahụ bụ ihe m nwere ebe a ma ọ dị oke ọnụ ala MA ị nwere ike nweta ya maka ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị jiri coupon. M na-enweta m ụtọ site ma Jo-Anns ma ọ bụ Michaels ma enwere coupon mgbe niile n'ịntanetị ma ọ bụ na ngwa ahụ. Ga-achọ ịzụta nnukwu igbe (5 lbs) wee jiri dere iji nweta 40%. Nwere ike banye na nweta Kupọns nri na ngwa ma ọ bụ na weebụsaịtị. Onu ogugu lb nke ise obula ga - eme ogbe ano nke obi uto ma di onu ala karia izuta igbe di uku karia izuta obere igbe.
I nwekwara ike ịzụta obi ụtọ na Amazon ma mgbe ụfọdụ ọ dị ọnụ ala karịa ịzụta ya n'onwe gị ọbụlagodi na dere na ị na-enweta mbupu n'efu na Amazon Prime.
Ihe na-esote bụ marshmallows. M na-azụta nke m na Winco mana ọ bụrụ na ịnweghị Winco, naanị chọọ ụlọ ahịa dị ọnụ ala dị ala marshmallows. Jet-puff na-esiri m ike ma kpọọ nkụ. Ga-achọ akpa 1 lb. Na Winco m otu akpa na-efu .87!
Ihe ndị ahụ bụ ihe ndị bụ isi na-eme ka Marshmallow fondant nke na-atọ ụtọ ịtụnanya ma ghara ịdọka ma ọ bụ kpọnwụọ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na-aga n'ihu ma hapụ ya na nkwupụta maka m ma echefula ile vidio ahụ na nhazi iji hụ otú m ga-esi mee nri nri ala m marshmallow.
boyz n hood ricky ọnwụ
Ntụziaka ndị ọzọ ị ga-ahụ n'anya
Kacha mma vanilla achicha uzommeputa
Esi kpuchie achicha na fondant
Easy buttercream frosting Ntụziaka
Ntụziaka na-atọ ụtọ nke na-adịghị adọka, dọka ma ọ bụ nweta akpụkpọ enyí! Ntụziaka kachasị amasị ndị na-eme ihe ntụrụndụ na ndị na-eme achịcha ọkachamara! Oge Nkwadebe:5 Nkeji Oge nri:25 Nkeji Oge niile:30 Nkeji Calorisị:1469kcal
▢32 oz (907 g) ntụ ntụ sifted (akpọkwa icing shuga, confectionary sugar)
▢16 oz (454 g) marshmallows WinCo, Hy-Top, Aldi, na ụdị Campfire na-arụ ọrụ kacha mma
▢iri abụọ oz (Ugboko 567 g) Wilton nwere mmasị Satin Ice fondant ga-arụkwa ọrụ
▢abụọ ngaji (abụọ ngaji) mmiri ọkụ Maka agba gbara ọchịchịrị, jiri mmiri ọkụ 1 tbsp kpokọta 1 agba mmiri jel
▢4 oz (Ogbe 113 g) mkpirisi akwukwo nri A na-akpọkwa abụba akwukwo nri ọcha, trex, copha
Spepu ntụ ntụ ma debe ya na nnukwu nnukwu efere.
Tinye akwukwo nri na mkpirisi na nnukwu efere.
Okpomọkụ marshmallows maka sekọnd 40 na ngwa ndakwa nri dị elu (ma ọ bụ na stovu elu). Ebido na ngaji.
Tinye marshmallows laghachi na ngwa ndakwa nri na kpoo nke ọzọ 30 sekọnd (ma ọ bụ na stovu elu). Ebido na ngaji.
Okpomọkụ marshmallows (oge ikpeazụ!) Maka 30 sekọnd na microwave (ma ọ bụ na stovu elu). Marshmallows kwesịrị ooey-gooey n'oge a ma dị njikere ka agbakwunye na nnukwu igwekota. Wunye mmiri gị n’elu ala marshmallows ka ha hapụ ha n’akụkụ nnukwu efere ahụ. Enubanye nnukwu efere na akwukwo nri shortening
Tụgharịa igwekota na ntọala kacha ala (ịtọ ntọala 1 na Kitchenaid stand mixers) na mgwakota agwa nko mgbakwunye Tinye na ọkara nke shuga ntụ ntụ gị, iko e ji atụ ihe n'otu oge, ma hapụzie nkeji abụọ. Ọ ga-abụ ihe siri ike ile anya na mbụ
Akwụsịla ịgwakọta ruo mgbe ọ na-arapara n'akụkụ nke nnukwu efere ma yie ezigbo. Gbakwunye iko ọzọ nke ntụ ntụ ntụ.
Wepụ obi ụtọ na mgbakwunye ihe mgwakota agwa site na itinye mkpịsị aka na mkpịsị aka gị na ịdọrọ ya na nko.
Wepu ngwakọta dị nro na nnukwu efere ma tinye ya n'ime nnukwu efere ahụ na ndị fọdụrụ na ntụ ntụ ahụ.
Mee ka Wilton nwee obi ụtọ na ngwa ndakwa nri maka 40 sekọnd ma gbakwunye na nnukwu efere ahụ na ntụ ntụ na marshmallow.
Igwakorita ruo mgbe ntụ ntụ, marshmallows na Wilton fondant na-akasị webatara. May nwere ike iji shuga ntụ ntụ dabere na ihu igwe gị ma nke ahụ dị mma.
Sere dị ka taffy ruo mgbe ọ na-agbatị ma na-eji ire ụtọ. Ọ bụrụ na enwere ebe siri ike ma ọ bụ na ọ na-adọka, gbanye ihe niile na ngwa ndakwa nri maka 30-40 sekọnd iji mee ka ọ dị ọkụ ma dọọ ka taffy na-eme ka aka gị dị mkpụmkpụ ruo mgbe ọ na-adọta n'emebighị emebi.
Chekwaa na zip-mkpọchi akpa na ụlọ okpomọkụ. Fondant ga na-maka ọnwa na a zip-mkpọchi akpa. Iji jiri ọzọ, kpoo ma gwakọta ya nke ọma ruo mgbe ị ga-agbatị tupu ojiji ọ bụla. Nwere ike ịgbakwunye agba dị ka achọrọ mana maka agba ọchịchịrị, ịkwesịrị ịgbakwunye ha n'oge usoro ịgwakọta ma ọ bụ ịnwere ike ịnweta ọgba aghara.
Calorisị:1469kcal(73%)|Carbohydrates:318g(106%)|Protein:abụọg(4%)|Abụba:25g(38%)|Abụba Ajuju:6g(30%)|Sodium:96mg(4%)|Sugar:Ogbe 287g(319%)|Calcium:3mg|Iron:0.4mg(abụọ%)
esi ọcha raspberries na mmanya
kedu ka ha si eme bekee chịngọm
ndị iri kacha mma n'egwuregwu basketball niile
ebee ka m nwere ike nweta akwa àkwá
esi mee ka strawberries dị ogologo